Ikhwalithi Ephakeme Izikhwama zesipho zokunethezeka zomuntu siqu zokufaka iphepha langokwezifiso ngiyabonga izikhwama zesipho ezinelogo yokuphrinta ifektri nabakhiqizi | Langhai
Izikhwama zesipho zokunethezeka ezenziwe ngokwezifiso ze-boutique zipakisha iphepha langokwezifiso ngiyabonga izikhwama zesipho ezinelogo ephrintiwe
Material: 210-250gsm C1S iphepha elimhlophe lekhadistock
Ukuqedwa: Glossy/matte lamination
Usayizi: 24 * 28 * 12cm / Usayizi owenziwe ngokwezifiso
Igama lomkhiqizo Izikhwama zesipho zokunethezeka ezenziwe ngokwezifiso ze-boutique zipakisha iphepha langokwezifiso ngiyabonga izikhwama zesipho ezinelogo ephrintiwe
Okubalulekile Iphepha le-cardstock le-210-250gsm C1S elimhlophe
Ukuqeda I-lamination ecwebezelayo/i-matte
Usayizi 24*28*12cm/ Usayizi owenziwe ngokwezifiso
Bamba Intambo kakotini, intambo yenayiloni, iribhoni, isibambo esisontiwe sephepha
Isikhathi sokuthumela Amaviki angu-2-5, ancike ku-QTY.
Ukupakisha Ipakishwe esikhwameni se-OPP, izikhwama ezingu-200 ezipakishwe enqoleni
Izidingo zobuciko nemihlahlandlela
Ngaphambi kokuqhubeka nokukhiqiza i-mock up, kuzodingeka senze umkhiqizo obonakalayo nomsebenzi wobuciko onikezwe iklayenti. Siyakwazi ukuhlinzeka isevisi yokuklama isakhiwo mahhala.
Ukuze siqinisekise ukuthi umsebenzi wobuciko ophrintiwe ulungile, sizodinga amaklayenti ukuthi alandele imihlahlandlela ngale ndlela elandelayo:
Singathanda ukusebenza ngemisebenzi yobuciko ku-AI, EPS, PSD, PDF format.
Sicela uqinisekise ukuthi umsebenzi wobuciko ufakwe i-vectorized, unendlela, u-rasterized.
Sicela uqinisekise ukuthi ukulungiswa kwezithombe ezisetshenzisiwe okungenani kungu-300dpi (ukulungiswa okuphezulu).
Sicela uqinisekise ukuthi izithombe ezisetshenziswe kumsebenzi wobuciko zishumekiwe ukuze ugweme izixhumanisi zesithombe ezingekho.
Sicela unikeze ngekhodi yombala we-pantoni yelogo noma umsebenzi wobuciko ozosetshenziswa.
Sicela uqinisekise ukuthi indawo yokopha okungenani i-3mm.
Uma umsebenzi wobuciko usuqinisekisiwe futhi ne-invoyisi yethu esemthethweni yekhotheshini isigunyaziwe, sizobe siqhubeka nokukhiqiza i-mock up. Isikhathi sokukhiqiza sokuhlekisa siyahlukahluka kumkhiqizo ngamunye. Isikhathi sokuhlekisa nesikhathi sokuhola kuvame ukunikezwa kanye nekhotheshini enikeziwe. Ngemuva kokuthi ukukhiqizwa kwe-mock up sekuqediwe, ithimba lethu labadayisi lizothumela isithombe sokuhlekisa noma amasampula wangempela kuklayenti ukuze lihlole futhi linikeze isiqinisekiso sazo sokuqhubekela phambili ukukhiqizwa ngobuningi.
Imihlahlandlela yokukhiqiza ngobuningi
Ngemva kokuqinisekisa ukuhlekisa, sizoqhubeka nokukhiqiza ukukhiqizwa ngobuningi.
Okwamanje, sicela uqaphele ukuthi ngeke sikwazi ukwenza izinguquko eziphathelene nomsebenzi wobuciko kanye nokunye okucaciswe kwento. Ezimweni lapho usuku lokulethwa luphuthuma, sizokweqa ukukhiqizwa kwe-mbumbulu futhi siqonde ngqo ekukhiqizeni ngobuningi. Ezimweni ezinjalo, iklayenti kuzodingeka liqiniseke ukuthi ngeke libe nezinguquko lapho kuqinisekiswa umkhiqizo. Izithombe zeqoqo lokuqala ezikhiqiziwe zizothunyelwa kuklayenti ukuze zibukwe uma kukhona isikhathi esanele sazo.
1.Impahla eluhlaza yekhwalithi ephezulu, esetshenziswe kabusha futhi eco-friendly
I-2.Izinhlobo ezahlukene zezinqubo zokukhiqiza ngokusho komklamo wamakhasimende
Imishini yokukhiqiza ye-3.Full-automatic kanye nomugqa wokukhiqiza owodwa wokumisa
Isipiliyoni seminyaka engu-4.9 sokuthekelisa embonini yokupakisha
I-5.Intengo yokuncintisana nokulethwa okusheshayo
1. Ingabe UyiNkampani Yokukhiqiza Noma Yezohwebo?
Siyi-100% Factory ikakhulukazi eyenza imikhiqizo yokupakisha iminyaka engu-20.
2. Singakwazi Ukubhrenda Ngelogo Yethu?
Impela, singaphrinta ilogo yakho emkhiqizweni.
3. Ingabe Uyabunikeza Ubufakazi Bamabhokisi/Izikhwama Ngaphambi Kokuthenga?
Impela, sihlinzeka ngesampula yokukhiqiza ngaphambi kokuthenga.
4. Ingabe Ubeka Impahla Kuma-Pallet?
Yebo, sizobeka izimpahla kuma-pallet ngokwesicelo sekhasimende.
5. Indlela Yokupakisha Yomkhiqizo Wamaphepha
Izimpahla zizopakishwa ngefilimu yepulasitiki kuqala, bese ipakishwa ebhokisini likathayela.Izovikela impahla yakho ukuze igweme ukumanzi nokulimala.
6. Ngingakwazi Ukwenza Ibhokisi Lephepha Elincane/Usayizi Wesikhwama Njengosayizi Owethu?
Yebo, i-oda elenziwe ngokwezifiso.
7. Ithini Imibandela Yakho Yokulethwa?
Samukela i-EXW, FOB, CNF, DDU, DDP, njll.
8. Ngingalindela Isikhathi Esingakanani Ukuthola Amasampula?
Ngemva kokukhokha inkokhiso yesampula futhi uqinisekise amafayela okugcina okuphrinta, amasampula azobe elungile ezinsukwini ezi-3-7. Amasampula azothunyelwa kuwe nge-express futhi afike ezinsukwini ezi-3-5.
9. Ungakwazi Yini Ukusenzela Umklamo?
Yebo. Sinethimba lochwepheshe elinolwazi olucebile ekwakhiweni kwebhokisi lephepha/isikhwama kanye nokukhiqiza.Vele usitshele umbono wakho, sizokusiza ukufeza umbono wakho kumabhokisi/izikhwama eziphelele.
10. Ngingalifaka Kanjani I-oda?
Ungasithinta nge-imeyili ku-kiki@shlanghai.cn. Sicela unikeze imininingwane yezidingo zakho ngokucacile ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke singakuthumelela okunikezwayo okokuqala ngqa.Ngokuklama noma enye ingxoxo, kungcono ukuthi uxhumane nathi ngo-whatsapp, i-Skype, noma ezinye izindlela ezisheshayo, uma kwenzeka ukubambezeleka.
11. Ngingalithola Kanjani Isampula Lokuhlola Ikhwalithi Yakho?
Ngemuva kokuqinisekiswa kwentengo, ungadinga amasampula ukuze uhlole ikhwalithi yethu.Kumahhala ukuthola isampula elingenalutho ukuhlola ukuklama kanye nekhwalithi yephepha, inqobo nje uma ukwazi ukukhokhela impahla eshibhile.Kumasampuli aphrintiwe, sizobheka u-$30-$100 ukuze sikhokhele izindleko. kufilimu nokuphrinta. Izindleko zesampula zingabuyiselwa emuva ngemva kokuqinisekisa i-oda.
12. Hlobo Luni Lwamafayela Owamukelayo Ukuze Aphrinte?
I-AI, i-PDF, i-CDR, njll.
13. Indlela yokuthutha Izimpahla?
Sikunikeza ukuthunyelwa okuhlukile.
1. Nge-courier, njenge-DHL, i-UPS, i-Fedex, njll. Kuyindlu ngendlu, imvamisa, izinsuku ezingama-5-7 ukufika.
2. Ngomoya uye esikhumulweni sezindiza, ngokuvamile, izinsuku ezi-3-4 ukufika.
3. Ngolwandle ukuya ethekwini lolwandle, imvamisa izinsuku eziyi-15-30 ukufika.
14. Kuthiwani Ngesikhathi Sokuhola Sokukhiqiza Okuningi?
Ngokweqiniso, kuya ngenani le-oda kanye nesizini ofaka ngayo i-oda. Ngokuvamile 7-15days mayelana 10000pcs.
Okwedlule: Ilogo Okuphrintiwe Okungokwezifiso Okuphrintiwe Ilogo Emhlophe Ye-Art Paper Shopping Isipho Isikhwama Sephepha Elimnyama
Olandelayo: Isikhwama sekhofi se-Kraft esinesibambo sephepha esisontekile/ esiyisicaba
10cm Isikhwama Sephepha Lesipho
Izikhwama Zezipho Ezingokwezifiso
I-Doorgift Paper Bag
Ibhokisi Lesipho Isikhwama Sephepha
Isikhwama Sephepha Lokupakisha Isipho
Isikhwama Sephepha Lesipho
Isikhwama Sephepha Lesipho Esincane
I-Gift Wedding Paper Bags
Isipho Sesikhwama Sephepha
Izikhwama Ezincane Zezipho
Isikhwama Esincane Sephepha Lesipho
Isikhwama Sephepha Lesipho Sewindi
Ilogo Yesipho Esenziwe Ngezifiso I-Luxury Boutique Coat...